Home » သတင်း » axon IBC မှာတိုက်ရိုက် IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
axon IBC မှာတိုက်ရိုက် IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
ထုတ်လွှင့်အတွက် IP ကိုမှပြောင်းရွှေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းသိမ်းပိုက်အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်စျေးသည်များကိုစောင့်ရှောက်သည်။ IP ကိုယခုအဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်နေတုန်း, ကျော်လွှားဖို့အများကြီးအတားအဆီးမဟုတ်ဘဲအနည်းဆုံးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်စပ်ရာမရှိသော switching ကွန်ရက်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် IP ကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနေဆဲရှိပါတယ်။ axon ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်းယင်းအသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် 30 နှစ်ပေါင်းကျင်းပနေ, IBC2017 မှာ၎င်း၏ရပ်တည်ချက် (10.A21) ပေါ်ဤအကြောင်းစိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းရန်ကြောင်းအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါအိုင်ပီ Workflows တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ featured အပေါင်းအဖေါ်များ Arista, SDNsquare, sonoVTS, Embrionix, Meinberg နှင့်ပါဝင်သည် utah သိပ္ပံ.
အရေးယူအတွက်ချောမွေ့စွာ IP ကို ​​switching
axon ကပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်မျိုးစုံရောင်းချသူကြားက IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါပြီးရှိကြတယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ထွက်ချထားခဲ့သည်။ သုံး Arista အိုင်ပီ switches များ (7050SX2-128 နှင့် 2x 7050SX-72Q) ကိုတိုက်ရိုက်သရုပ်ပြများအတွက် IP ကိုကျောရိုးသည်။ switches တွေတစ်ခုမှာကျောရိုးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်; အခြားနှစ်ဦးကိုအရွက်ဖြစ်ကြသည်။ ဒီအရွက် / အရွက် configurations ဖွအဖြစ်အရွက် / ကျောရိုး / အရွက် Setup ။
SDNsquare ရဲ့ GRID ဆော့ဖျဝဲတစျဆငျ့, axon ဝန်ဆောင်မှု၏အာမခံချက်အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူ switching salvo switching အဖြစ်စူပါအစာရှောင်ခြင်းချောမွေ့စွာအိုင်ပီကဗီဒီယိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Arista ကျောရိုး-ရွက်အိုင်ပီကွန်ယက်ကိုသည် dynamically SDNsquare GRID ကစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် 80 ထက်ပိုတက်ခဲ့သည်ဆို၏ဖြစ်ပါတယ် HD ဗီဒီယိုကသတင်းရပ်ကွက်။
Hybrid ကို Ethernet-SDI ဟန်ပြ
axon ရဲ့တဲမှဧည့်သည်များမှာလည်းတိုက်ရိုက်စပ် Ethernet-SDI သရုပ်ပြတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ SDI သတင်းရင်းမြစ် 440G ကနေ, axon ရဲ့ synapses NIO8 module တစ်ခုမှတဆင့်အိုင်ပီတစ်ခု 3-ရုပ်သံလိုင်း bi-directional Ethernet / SDI တံတားအဖြစ်ပြောင်းလဲကြလိမ့်မည် /HDIP ကို ​​gateway များရန်က de-ဗဟိုလမ်းကြောင်းနှင့်အတူသို့မဟုတ် Embrionix '' SFP SDI မှတဆင့် compressed လုပ်မထားတဲ့ Ethernet ဟာကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှ -SDI ။ တစ်ဦးရဲ့ IP အခြေခံအဆောက်အအုံဖို့ဖြစ်ပါတယ်တက်နှင့်ချိတ်ဆက် utah သိပ္ပံ အိုင်ပီစီးနှင့်လမ်းကြောင်းများထုတ်ပေးထားတဲ့စီးရီး2စပ် router ကိုတစ်ဦး sonoVTS hd2Line Pro ကိုစီးရီး FHD အိုင်ပီ-Display ကိုသို့စီး။
ဒါ့အပြင်ဒီဟိုက်ဘရစ် IP ကိုပတ်ဝန်းကျင်၏အစိတ်အပိုင်းအိုင်ပီပု Arista ကျောရိုးကနေစီးအားလက်ခံတွေ့ဆုံသည့် axon SynView အိုင်ပီမြင်ကွင်းစုံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ SynView SDI မြင်ကွင်းစုံလည်းချိတ်ဆက်နေသည်က SDI သို့အိုင်ပီစီးပြောင်းပေးသည့် NIO440 ထံမှ၎င်း၏ SDI input ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ မြေတပြင်လုံးစနစ်အချိန်အတိအကျပရိုတိုကော (PTP) မှတဆင့်တစ်ဦး Meinberg LANTIME M1000 ထံမှအခြိနျဇယားဖြစ်ပါတယ်ရောက်လာပါတယ်။ PTP ဥပမာ Ethernet နဲ့တူကွန်ရက်များအတွက်တိကျသောထပ်တူခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒေတာအတွက်ဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်လုပ်ပြီးအချိန်တံဆိပ်ခေါင်းများကို အသုံးပြု. ဖြင့် nanosecond အကွာအဝေးအတွင်းတစ်ဦးတိကျမှန်ကန်မှုကိုအောင်မြင်နိုင်ပါသည် packets ။
အိုင်ပီထိန်းချုပ်ရေး & Network မှစီမံခန့်ခွဲမှု
ယနေ့နှင့်အနာဂတ် IP ကိုထုတ်လွှင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်ဦးကအရေးပါသောအ element က IP ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများ၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးပါပဲ။ ယင်း၏ IBC IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသရုပ်ပြ၏စိတ်နှလုံးမှာ axon ရဲ့ Cerebrum Cerebrum အတွင်းဖြန့်ဝေသည် IP လမ်းကြောင်းစနစ်ကထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်သော NMOS IS-04 / 05 Discovery, မှတ်ပုံတင်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု protocol များကို enable အသုံးပြုသည်။ Cerebrum အတွက်အနာဂတ်ရွေးချယ်မှုများ, စနစ်များတွင်အသုံးပြုသောကွန်ယက် switches များ၏လွယ်ကူသော Configuration နဲ့ setup ကို, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကို enable ကွန်ယက် switch သည်စွမ်းဆောင်ရည်၏ကွန်ယက်အဆင့်မြင့်စောင့်ကြည့်ပေးလူသိများအိုင်ပီ devices နဲ့ switch ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများအလိုအလျှောက် configuration ကို enable ပါလိမ့်မယ်။
"ဒီနှစ် axon ယင်းထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမှဝန်ဆောင်မှု၏ 30 နှစ်ပေါင်းကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်," ဇန်နဝါရီ Eveleens axon ရဲ့ CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်လက်အောင်မြင်မှု client များ '' စိန်ခေါ်မှုများပေါ်မှာငါတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာရုံအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့အပေါ်သို့အားကိုးနိုင်ပါတယ်ဖြေရှင်းချက်ပို့နေသည်။ IP ကိုတစ်ဦးအမှန်တကယ်ဖြစ်လာအဖြစ်အဓိကမိတ်ဖက်နှင့်အတူအစိုင်အခဲအိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပူးပေါင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထုတ်လွှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံထဲမှာ axon ရဲ့ထူးချွန် IP ကိုပြောင်းရွှေ့သူတွေကို Multi-ရောင်းချသူ enviroments မှာပေါ်ထွက်လာသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားကျော်လွှားအဖြစ်လက်တွေ့ကျကျမလွှဲမရှောင်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲများဖြေရှင်းကူညီပေးပါမည်။ ကျနော်တို့ IBC မှာဒီသရုပ်ပြခြင်းနှင့်ဧည့်သည်များကသူတို့ရှေးခယျြသောလမ်းကြောင်းကိုလမ်းညွှန်ကူညီနိုင်ပါလိမ့်ပေးချင်ပါတယ်။ "
axon လည်းပျောက်သည်၎င်း၏တဲထဲကနေ IBC မှာကတခြားအိုင်ပီအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါဆန္ဒပြပွဲများအတွင်းပါဝင်သည်။ ပြပွဲမှဧည့်သည်များအတွက် SynView 4K အိုင်ပီမြင်ကွင်းစုံတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့် ROOM တွင် E.04 နှင့် NIO05 Ethernet-SDI တံတားအတွက်ရည်ရွယ် '' အစစ်အမှန်ကမ္ဘာက IP ကိုဟန်ပြ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Cerebrum NMOS IS-106 / 440 စွမ်းရည်အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် ရပ်တည်ချက်အပေါ် sonoVTS IP ကိုခင်းကျင်းပြသ 8.B44
အဆိုပါနယ်သာလန်ရုံးချုပ်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရုံးများနှင့်အတူ axon ထုတ်လုပ်, ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားထုတ်လွှင့်ပစ္စည်းကိရိယာဈေးကှကျ, အပြောင်းအလဲနဲ့, အသံနှင့်ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများ၏မှတ်တမ်းတင်စောင့်ကြည့် & ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်လိုက်နာမှု။ ထုတ်ကုန်များအဆင့်မြင့် signal ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းစနစ်, ဆန်းသစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့် modular ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်မစ်ရှင်-အရေးပါထုတ်လွှင့် applications များအတွင်းအရည်အသွေးမြင့်မား, တတ်နိုင်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး
NEP ဗြိတိန်အပြည့်အဝ-IP ကိုအားကစားထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ် & Monitor လုပ်ဖို့ Wimbledon 2018 မှာ axon Cerebrum ဖြန့်ချထား - ဇူလိုင်လ 5, 2018
နယူးစီအီးအိုအဖြစ် axon အမည်များ Michiel ဗန် Duijvendijk - ဇူလိုင်လ 2, 2018
ITV Completes The Roll-Out of Six HD Regional News CentresUsing Axon Cerebrum Control - ဇွန်လ 21, 2018
Arista axon ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Embrionix IBC 2017 အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါအိုင်ပီ Meinberg SDNsquare SoftAtHome, MStar, CES2017 sonoVTS က Ultra HD ဖိုရမ် utah သိပ္ပံ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-09-12
ယခင်: တောက်ပသော, ကျယ်ပြန့်, ပိုမိုပေါ့ပါး - LITEPANELS Gemini နှင့်အတူဘားပေါ်ပေါက်
နောက်တစ်ခု: Next Post
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "axon IBC မှာတိုက်ရိုက် IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါခင်းကျင်းပြပေးပါရန်" ။ http://www.broadcastbeat.com/axon-to-showcase-live-ip-interoperability-at-ibc/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။